Rollator R-4100N Junior Yakawedzera Narrow Kufamba Rubatsiro
×	 R-4600 - 12 lbs	1 × $94.99
View ngoro "R-4600 - 12 lbs" yakawedzerwa kungoro yako.
Iyo Karman R-4100 Narrow Series Rollator inonyatso shanduka yekudzivirira yekudonha rubatsiro yakagadzirirwa chigaro chepasi chevanhu vanoda komputa uye isina kureruka yekufambisa rubatsiro. Yakareruka kupfuura mazhinji maviri-mavhiri anofamba ane mapaundi gumi nerimwe chete, ichi chakasimba uye chakavimbika chinotenderera chinopa iko nyore kwaunoda pamutengo wausingakwanise kupfuura. Iyi yakatetepa 11 Wheel Rollator inoratidzira 4-casters ekugona kudzora pasingaenzanisike pameso asina kuenzana, ichichiita chakanakisa rollator yezuva nezuva yekushandisa mukati uye kunze. Ergonomic inobata uye loop loop mabhureki akaisirwa akajairwa, achipa akawedzera nyore uye nyaradzo kune vashandisi vasina kusimba kubata kana arthritis.
R-4100N - 11 lbs huwandu
SKU: R-4100N Category: Vanotenderera Tags: 4 mavhiri, 4100n, R-4100n
Iyo Karman R-4100 Series rollator Walker inobatsira isingachinjiki yekudonha ekudzivirira rubatsiro yakagadzirirwa nechigaro chepasi chevanhu vanoda kubatana uye kureruka munhu kufamba rubatsiro. Yakareruka kupfuura mazhinji maviri-mavhiri vanofamba pamapondo gumi nerimwe chete, izvi zvinogara zvakasimba uye zvakavimbika rollator inounza iko nyore kwaunoda nemutengo wausingakwanise kupfuura.
Inoratidzira ruoko-rwakabata pamwe nekukiya loop mabhureki
Lightweight Aluminium furemu inorema mukati pa11 lb.
Padded, yakatetepa yepazasi chigaro
Chigaro Kureba 15 padiki.
Chigaro Pad Upamhi 12 padiki.
Kureba Kumashure 10 padiki.
Kunopindirana Kureba 32-35 padiki.
Kutumira Kukura 31.25, L x 22, H x 10, W